John Smith ရဲ့ CEO | 🥇【 # No.1 ငါ့ကိုသင်ကကူညီကြပါစို့ 】
John Smith ရဲ့ CEO
ဧပြီလ 20, 2019
ဧပြီလ 23, 2019
Published by ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ at ဧပြီလ 22, 2019
သာလျှင် $5များအတွက် Uplod CV ကို - သင်ယူအေအီး, ကာတာသို့မဟုတ်ဆော်ဒီအာရေဗျအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှိနိုင်ပါသည်
John Smith ရဲ့ CEO ကဒီ ;-) ငါ၏နာမများနှင့်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပြီး, ငါဆောက်ရှိပြောနိုင် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအများဆုံးကြိုက်ကုမ္ပဏီများထဲမှတစ်ခု။ နေ့တိုင်းလူတွေသန်းပေါင်းများစွာကိုငါ့ post ကိုတွေ့မြင်နိုင်ကြသည် ဒူဘိုင်းအတွက်, ကာတာနိုင်ငံ, ဆော်ဒီအာရေဗျ.
ငါသည်တပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒူဘိုင်းမန်နေဂျာပေါ့။ ထိုအကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံကိုသင်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်ပြောနိုင် သင့်ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝ၌အလွန်အောင်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်လာ။ ပြီးခဲ့သည့်3နှစ်များ မှစ. ငါနိုင်ငံတကာကနည်းပြစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပွုလုပျခွငျး Start မှစီမံခန့်ခွဲပါပြီ။ ငါ့အသက်ကိုဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်လန်ဒန်မှာရှိတဲ့တခြားအောင်မြင်သောနည်းပြအဖြစ်ဒါကြောင့်တောက်ပနှင့်ကောင်းတဲ့ဖူးပါ။
ငါ့အသက်ကိုအမှားတွေနဲ့မကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ၏ပြည့်စုံလေ၏။ နှင့်သင်တန်း၏, ငါဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံး ငါ၏အဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီတည်ဆောက်ခြင်းစဉ်။ သို့သော်သင်သည်ငါ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Facebook နှင့် LinkedIn တို့အပေါ်ယခုဖြစ်လာနေသည်ဘယ်လောက်လူကြိုက်များအွန်လိုင်းမြင်နိုင်ပါသည်။
တချို့ကကြိမ်ဖြစ်နိုင်သည်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ကောင်းသောလမ်းညွှန်လာပြီ။ သင်၏ဥစ္စာရန်သော့ချက်။ A ကောင်းဆုံးစီးပွားရေးသမား ငါကဲ့သို့သောသင်အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်လာမှဤမျှလောက်များစွာသောနည်းလမ်းတွေသင်ပေးလိမ့်မယ် မန်နေဂျာရဲ့အဘူဒါဘီသို့မဟုတ်ဒူဘိုင်း၌တည်၏။
ငါ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံ, ငါ၏အနောက်ဆုံး5clients များ မှစ. ။ စံအလုပ်အကိုင်သို့မဟုတ်ပင်အခြေခံအလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေနေခဲ့သည်။ သို့သျောလညျး သူတို့နားလည်မှုလွဲစာပိုဒ်တိုများမိမိတို့၏ CV ကိုစာရေးတံများတွင်ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း။ ထို့အပြင်တစ်ဦးကိုယ်ရေးရာဇဝင်စာဖြင့်ရေးသားတော်မူကြောင်းကိုလမ်းကြီးတွေအဆင့်ကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတစတိုင်အပေါ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
ဒါကြောင့်ကျွန်မကိုယ့်ကိုယ်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အတော်လေးခက်ခဲကိုသူတို့ကအသေးစိတ်သို့ get ပါပြီ။ ငါကeမိန့်ငါ၏အ copywriter နှင့်ကျွမ်းကျင်သူများကငါ၏အသင်းထံမှ xtra န်ဆောင်မှုများ သူတို့ရဲ့ CV ကိုတိုးဖို့စီမံထားပါတယ်။ ငါ၏အ clients များအဘူဒါဘီကနေဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီများထဲမှတစ်ခုကနေတစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုတယ်၏ရလဒ်များကို၌တည်၏။
ကျွန်မပြည်တော်ပြန်တွေအများကြီးကိုကူညီစီမံခန့်ခွဲခဲ့ကြလို့ပဲ။ ကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရနေရာချခြင်းနှင့်အိန္ဒိယထံမှလူကိုကူညီစီမံခန့်ခွဲ, ပါကစ္စတန်, တောင်အာဖရိကတူရကီနှင့် Philipines ။ နှင့်သင်တန်း၏, ငါအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနှင့်ငါ့အကြိုက်ဆုံးကာတာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေဖြင့်လူဦးနည်းပြအလုပ်ကိုတာပါ။
ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ? အဖြေရိုးရှင်းပါသည်။ ကာတာနိုင်ငံနေသောလူမျိုးဖြစ်ကြ၏ ပင်လယ်ကွေ့ဒေသအချမ်းသာဆုံးလူမျိုးတို့၏တဦးတည်း။ မယူအေအီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ။ ငါအခစျြအဘယ်ကြောင့်ဤသူကားအ မီးရထားတှဲ လူတစ်ဦးမှာသူတို့ကို။
ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိကျွန်မကာတာနိုင်ငံကနေတောင်မှလူတွေကလေ့ကျင့်ပေးဖို့စီမံခန့်ခွဲပါပြီ။ သူတို့ထဲကရိုးရိုးသားသားဤမျှလောက်များစွာသောယူအေအီး၌ကျင်လည်ခြင်းနှင့်အသက်ရှင်ရန်မျှော်လင့်နေကြတာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပိုက်ဆံ-အောင်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အသက်ရှင်ရန်အရှိဆုံးအဆင့်မြင့်သောအရပ်ရှိသည်။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုသေချာအိပ်မက်အသက်ရှင်ဖို့ရာအရပျနှငျ့အလုပျအဘို့ဖြစ်၏။ ဥပမာအားဖြင့်, ဆေးရုံများနှင့်ပညာရေးဖြစ်ကြ၏ မြေတပြင်လုံးပင်လယ်ကွေ့ဒေသကြီးအတွက်အကောင်းဆုံးများထဲမှ။
ငါယူအေအီးကိုချစ်ပြုပါငါ့ကိုနားလည်လက်လွတ်မ ဒူဘိုင်းလူတိုင်းအဘို့ကြီးစွာသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ငါစော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌ငါ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတည်ဆောက်ရန်စတင်ပါပြီအဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။ ငါ၏အအိပ်မက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကတခြားနိုင်ငံတွေကနေလူတွေကိုကူညီရနျဖွစျသညျ။
အကြှနျုပျ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံကိုအတွေ့အကြုံကောင်းတွေနဲ့လူတို့အဘို့အလွန်တန်ဖိုးရှိသောဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ကောင်းစွာပညာတတ်များနှင့်မြင့်မားသောအသိဉာဏ်မန်နေဂျာဘို့။ အကြှနျုပျ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနည်းပြစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမန်နေဂျာဘို့အတော်လေးတိကျတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ငါနိုင်ငံတကာကလုပ်သားများကိုကူညီစီမံခန့်ခွဲပါပြီ။
ကျိန်းသေကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့တန်ဖိုးရှိထက်အများကြီးပိုပါတယ်။ A ကောင်းဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနည်းပြဖြစ်ပါတယ် သငျသညျအစဉျအမွဲအိပ်မက်မက်ထက်တန်ဖိုးရှိပိုပြီး။ ငါ့အသက်ကိုနှင့်စီးပွားရေးနည်းပြတစ်ဦးတစ်လ 8,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာထက်အများကြီးပိုလုပ်ဖို့, ငါ့ clients များကူညီပေးသည်။
ကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါ့အကို client ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်၎င်းတို့ကိုဖေါ်ပြခြင်း အသစ်သောအလုပ်အကိုင်များရရှိရန်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်လာဖို့ဘယ်လို ပိုင်ရှင်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမန်နေဂျာ။
ဘယ်မှာငါ၏အ clients များနိုင်ငံအသစ်များအများကြီးရှိပါတယ် ငွေရှာ စတင်. သို့မဟုတ်ပင်အလုပ်သစ်ဆိုတော့။ ငါ၏အ clients များအလုပ်နှိပ်နဲ့ရတဲ့ရှိရာဥရောပ၌အနည်းငယ်ကောင်းသောနိုင်ငံများရှိပါသည်။ ဥပမာအားမော်လ်တာနဲ့ဆိုက်ပရပ်စ်ဤသည်နေ့ရက်ကာလစီမံခန့်ခွဲဖို့ကောင်းပါတယ်။ ထိုအရပ်၌မိမိတို့၏ CV ကိုပေးပို့ခြင်းစဉ်ကိုငါ့ဖောက်သည်တွေအများကြီးကောင်းတစ်ဦးအချိန်ရတဲ့သေချာသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတစ်ဦးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် သို့မဟုတ်ပင်ထိုသို့ပြုမှမည်သို့မည်ပုံနှင့်အွန်လိုင်းငွေရှာဖို့ဘယ်လိုငါ၏အ clients များပြသပါ။
ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖွင့်ဖို့ပြီးပြည့်စုံသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကြောင်းစဉ်းစားအဆိုပါကျွမ်းကျင်သူများအများစုဟာ ယူအေအီးအတွက်ကောင်းသောအလုပ်ရရှိ သူတို့ကိုကြွယ်ဝသောစေမည်။ သို့သော်လက်တွေ့တွင်, အသက်ရှင်စော်ဘွားအတွက်လုပ်ကိုင်ဖို့နောက်ထပ်နည်းလမ်းရှိသေး၏။
ငွေရှာဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုအလုပ်တစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာတစ်ဦးရဲ့ကိုယ်ပိုင်သူဌေးများနှင့်ပွင့်လင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်လာပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောဆိုင်အဖြစ်တောင်မှရိုးရှင်းသောဘား, စားသောက်ဆိုင်နှင့်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကလူတွေကိုသူတို့ရဲ့ဘဝအတွက်အောင်မြင်သောဖြစ်လာမှကူညီပေးပါမည်။
ရဲ့ခဏငါ့ကိုအကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့။ ငါကို Quad စက်ဘီးနှင့်ဂျက်က Sky ကိုချစ်။ ထိုအခါငါအားကစားကားများမောင်းနှင်ကြိုက်တယ်ပြု အလွန်အောင်မြင်သောအသက်တာကိုရှိခြင်းနှင့်ငါ၏အသက်တာ၌ပိုက်ဆံတစ်ဦးအထင်ကြီးငွေပမာဏပါစေ။
ကောင်းသောဘဝအတှေ့အကွုံရှိခြင်းနေချိန်မှာငါကမ္ဘာတဝှမ်းခရီးထွက်ခဲ့ကြပြီးကမ္ဘာဂြိုဟ်သည်မြေကြီးပေါ်မှာထိပ်-performing အလုပ်အမှုဆောင်နှင့်အတူစကားပြောဆိုရန်စီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏ blog post: ဖတ်အဘယ်ကြောင့်ဤသူကားအ။ သငျသညျမှာဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုနှင့်အတူလူတဦးဖြစ်လာရန်စိတ်ဝင်စားသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
နေစဉ်တွင်သင်တို့ကိုကျရှုံးဖို့သင်ယူရပါမည်သည့်အောင်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်လာသည်။ ထို့အပွငျပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်ရှေ့ဆက်။ နှင့်ကံမကောင်းသောငါ့ကိုလည်းရန်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ငါသည်ငါ့ရူပါရုံကိုဆုံးရှုံး နှင့်ခက်ခဲတဲ့ငါသည်ငါ့မျှော်လင့်ချက်ဆုံးရှုံးဘူး, ငါ့မိသားစုဆင်းရဲတွင်းနက်နေကြလိမ့်မည်။
သငျသညျစဉ်းစားစေခြင်းငှါ ငါ LinkedIn တို့သို့မဟုတ် Facebook ပေါ်တွင်တွေ့မြင်ကြသူကဒီကောင်လေး။ ယခုငါသူ့ကိုဖြစ်ရန်ဆန္ဒရှိကောင်းသောငွေရှာ။ ဒါပေမယ့်လက်တွေ့မှာတော့, သင်တို့ကိုငါအခုချက်ချင်းစီမံခန့်ခွဲနေကြကဲ့သို့သောအလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်အခြေအနေ၌ငါ၏အမိမိကိုယ်ကိုချပြီးမှလည်ဆံရှိသည်။
သို့သျောလညျး, သင်တို့ကိုငါထက်ပင်ပိုမိုကောင်းမွန်သို့မဟုတ်စမတ်မပေးဘူး။ ဒါကြောင့်အဘယျသို့အကြှနျုပျကိုအောင်ရဲ့ ဘဝမှာအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ဖြစ်လာ?။ ကိုယ့်ကိုအနည်းငယ်ပိုရှည်ငါ၏အစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစွန့်စားမှုပါစေ။ ဖန်ဆင်းနှင့်အခြားသူများအကြံပေးချင်ပါတယ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံကသူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်။ ကျိန်းသေဒူဘိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှရတဲ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ခဲ့သည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမှတ်တံဆိပ် - အောင်မြင်မှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဖြစ်ပျက်မည်မဟုတ်
သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမှတ်တံဆိပ်နှင့်သင့်အသက်တာကိုနောက်တဖန် Build နှင့်ထပ်ခါထပ်ခါနောက်လိုက်ဖို့ကောင်းတစ်ဦးအယူအဆမဟုတ်ပါ။ အကြှနျုပျမူကားပေး ငါ၏အပုဂ္ဂိုလ်ရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အတူအတက်အကျ။ ငါသေချာသိတစ်ခုမှာအရာ။ အောင်မြင်မှုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အစဉ်မပြတ်ငါသူအစိုးရအတွက်အလွန်အောင်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ဖခင်စောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။ သူကအကောင်းငွေရှာခြင်းနှင့်အလွန်ကောင်းစွာမိသားစုကိုထောက်ပံ့ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်ကျွန်မငယ်ရွယ်ငါ dint ခဲ့စဉ်ကတည်းကသူမပါလိမ့်မယ်အဖြစ်အောင်မြင်မှုရရန်စီမံခန့်ခွဲဘူး။
ကောင်းပြီ, မလူတိုင်းအတွက်ဒါရိုက်တာများဖြစ်လာစေရန်နှင့်အမြင့်ဆုံးအာဏာပိုင်များအတွက်အလုပ်လုပ်။ သို့သော်လည်းငါသည်သေချာများအတွက်သင်ယူတဦးတည်းအရာသည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရည်မှန်းချက်များအတွက်တက်ပေးသည်ဘယ်တော့မှ။ လှပသောနေရာများမှဦးဆောင်၏ခက်ခဲနည်းလမ်းများ။
ငါ့အဘသည်အစဉ်အမြဲအခွင့်အရေးများကိုစဉ်းစားရန်ပြောတယ်။ မိုက်အမှားတွေပြုပါနှင့်အစဉ်အမြဲတစ်ခုသာဥပဒေရေးရာလမ်းကြောင်းလမ်းမသွားပါစေနဲ့။ ဤရွေ့ကား, မှန်သည်။ သငျသညျတခါမှားညှနျကွားခရွှေ့မည်ဆိုပါကကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဘယ်သူမျှမပြန်မယ့်ရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်အငြင်းပွားခြင်းနှင့်ဘေးဖယ်အပေါ်ငွေရှာဖို့ကြိုးစားပါဘူး။ အာဏာပိုင်များထွက်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုလျှင်, သင်သည်အစဉ်အလျောက်ပတ်သောငွေရှာဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
အမှား Make ဘယ်တော့မှမ!
ရာဇဝတ်ကောင်အမြဲခဏအကြာတွင်ရာဇဝတ်ကောင်ဖြစ်လာသည်။ သငျသညျပြစ်မှုဆိုင်ရာစံချိန်ရဲ့ရှိခြင်းပြီးနောက်လုပျနိုငျဖြစ်နိုင်သောအဘယျသို့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သင်သည်မည်သည့်ကောင်းသောကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်လုပ်လို့မရဘူး။ ထိုအခါတံခါးများအများစုသင်တို့အဘို့ပိတ်ပစ်လိမ့်မည်။
အကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေသင်၏အချိန်နှင့်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေကြသည်။ သငျသညျကျိန်းသေနည်းနည်းပိုအန္တာရာယ်ဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ နှင့်သင့်ချွေတာရေးအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူနှင့်ကောင်းတစ်အားလပ်ရက်ခရီးစဉ်ရယူပါ။ သို့မဟုတ်သင့်အသက်တာ၌အသစ်သောအရာတစ်ခုခုကိုကြိုးစားကြည့်ပါ။ ဒါကတကယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်သူများအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်။ ဒါဟာသင်ထူးဆန်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်အဓိကတစ်ဦးမိတ်ဆွေကောင်းသူညာဖက်အချိန်တွင်ညာဘက်ရာအရပျ၌ရှိ၏တစ်လ 200k အမေရိကန်ဒေါ်လာထက်ပိုမိုသာရှိသောကြောင့်စေသည်။ သူကတစ်ဦး SEO ဆိုသည်မှာအထူးကုကြီးနှင့် jacuzzi ၌ထိုင်ခဲ့သည်။
အထံတော်သို့လာမယ့်လူတစ်ဦးဒူဘိုင်းနှင့်လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ကားတစ်စီးကုန်သည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုသူတို့ကပဲစကားပြောနှင့်ငါ့မိတ်ဆွေတစ်လက်ခံရရှိနှင့်သူ၏ကုမ္ပဏီအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်နေဘို့စာချုပ်စတင်ပါ။ ဒါကြောင့်, တစ်ဦးကောင်းအောင်မြင်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစိုက်ကြည့်ရုံအင်တာဗျူးများဖြတ်သန်းမဟုတ်ပါ။ တချို့ကကြိမ့်အများဆုံးလိုအပ်သူလူပေါင်းချဉ်းကပ်ရန်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုလာပြီဖြစ်ပါတယ်။
ငါ၏အကွံဉာဏျ ယူ. မြန်နှုန်းနှင့်သင်၏အသက်တာကိုအသကျရှငျစတငျဖို့ကြိုးစားပါ။ လက်ပ်တော့၏ fronting နှင့်သင့် CV ကိုစောင့်ဆိုင်းပေါ်မှာထိုင်မရငွေရှာနေသောပြည်သူ့။ သူတို့ကကောင်းတဲ့အမြင့်ဆုံး rated option ကိုအပေါ်သူတို့ရဲ့ဘဝကိုစီမံခန့်ခွဲရသည်။ box ကိုထဲကစဉ်းစား Start နှင့်သင့်ဦးခေါင်းတံဆိပ်ခတ်ထား။ သင်တို့ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကောင်းပြီ, ပင်လယ်ကွေ့မှာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုယူအေအီးဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်ပထမဦးဆုံးမှာကျနော်တို့ငါတို့ချစ်သောဒူဘိုင်းအကြောင်းပြောနေတာနေကြသည်။ တဖန်သင်တို့ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ, အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, တွန်းအားပေးအကြောင်းကြားစာနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာကိုအသုံးပြုမြင်သည်အတိုင်း အလားအလာရှိသောအလုပ်ရှာဖွေသူများရှာဖွေငှားရမ်းရန်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအလုပ်အကိုင်အရယူခြင်း။ အထူးသဖြင့်အနေဖြင့် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိဖိလစ်ပိုင်နှင့်တောင်အာဖရိကဒါကြောင့်စီမံခန့်ခွဲဖို့အတော်လေးခဲယဉ်းသည်။
ကုမ္ပဏီတွေအများကြီးစကားပြောယေဘုယျအားဖြင့်အဆိုပါဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီနှင့် ပင်လယ်ကွေ့ဒေသအတွက်။ နေ့တိုင်း jibs ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်စျေးကွက်ပစ္စည်းပို့စ်တင်။ သင်နှင့်အတူရိုးသား Be
ထိုအကြှနျုပျတို့ရှိသမြှကိုကိုယ်သိရ LinkedIn တို့ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူ Dhab အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအလုပ်အကိုင်ဖြစ်ပါသည်ကိုယ်။ ဒီကုမ္ပဏီ၏တစ်ခုတည်းသောအနုတ်လက္ခဏာဘက်အိန္ဒိယကနေယှဉ်ပြိုင်မှုတွေအများကြီးရှိကွောငျးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်လျှောက်ထားနေချိန်မှာငါ့အကို client ရှိခြင်းကြောင့်ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ရိုးရှင်းစွာအဟုတ်ပါတယ်သင်အေဂျင်စီများနှင့်အလားအလာ Headhunters ထောင်ပေါင်းများစွာ၏များ၏ရှေ့မှောက်၌သင်၏ CV ရနိုင်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့် တကယ်တော့အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအောင်မြင်ပြီးသူ။ ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကိုအတွက်အမြန်ဆုံးလမ်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကဘာလဲဆိုတာထွက်ရှာပါ။ ဒါကနေသောလူမှုမီဒီယာများတွင်အလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဖြစ်ပါသည် နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှု။ ထိုအခါအလုပ်ရှာဖွေသူအဖြစ်သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး LinkedIn တို့ပရိုဖိုင်းကို အသုံးပြု. သို့မဟုတ်ပင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူချိတ်ဆက့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုအောက်ပါအားဖြင့်အလွန်ကောင်းသောတန်ဖိုးကိုရနိုင်သည်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူကောင်းသောအလုပ်အကိုင်ရယူခြင်းကြောင့်အလွန်အမင်းဖြစ်နိုင်။ သင်ပြုသမျှအားလုံးသည်ရိုးရှင်းစွာကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်စားလှယ်တစ် CV ကို upload လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါငါတို့သည်သင်တို့၏ CV ကိုကြည့် ယူ. မှားယွင်းနေသည်အဘယ်အရာကိုတွေ့လိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်မည်သို့ဖို့အထင်ကြီးလျှောက်လွှာရဲ့အပေါ်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် စော်ဘွားအလုပ် ဈေးကွက်။
ပင်လယ်ကွေ့ဒေသကြီးအတွင်း၌ပြည်တော်ပြန်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အမြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အနေဖြင့်။ သာ 25% နိုင်ကြသည် ဒူဘိုင်းကနေအလုပ်ရရန် အဘူဒါဘီအတွက် 30% ထက်နှင့်ပိုပြီး။ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီတို့အကြားကွာခြားချက်ဟာစီးတီး့အရွယ်အစားဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်မြို့ကြီးများ၏နှစ်ဦးစလုံးနေ့တိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ၏အနည်းငယ်ရာပေါင်းများစွာကျော်ငှားရမ်းထားပါသည်။ ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်ရုံစော်ဘွားစတင်သူကိုသစ်ကိုလူတို့အဘို့ဇိမ်ခံ၏ကြင်နာဖြစ်ကြသည်။
2001 သစ်ကိုကျွမ်းကျင်သူများစော်ဘွားကူးလာကတည်းကကြောင့်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်အနေဖြင့် သူတို့ပဲအသစ်တခုစွန့်စားမှုစတင်နိုင်ရန်ရှာဖွေနေရှိရာနိုင်ငံများတွင်။ နှင့်သင်တန်း၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝ။ သူတို့ကကျနော်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီဖွင့်လှစ်မယ့်အနှစ်မတိုင်မီငါလူဝင်မှုကြီးနီးပါးဘာမျှမအတွက်အလုပ်လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအမြဲပြည်တော်ပြန်ကကူညီရန်ကြိုးစားအထူးသဖြင့်အင်ဒီးယန်းများနှင့်ဒူဘိုင်းအတွက်ပါကစ္စတန်လုပ်သားများ။ ဥပမာအားဖြင့်ကျနော်တို့ကအမြဲလှုံ့ဆျောဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်နှင့် ယူအေအီး၌မသာအလုပ်ရှာဖွေသူများကိုလမ်းညွှန်။ ဒါပေမယ့်လည်းကာတာနိုင်ငံနှင့်ကူဝိတ်၌တည်၏။ အများအားဖြင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာပင်လယ်ကွေ့ဒေသကြီးအတွက်ဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. ။
သို့သော်ဤမြေတပြင်လုံးသဘောတူညီမှုပြီးမြောက်ရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ ဤသည်၏အဘယ်ကြောင့်အများဆုံးဖြစ်ပါသည် အလုပ်ရှာဖွေသူများကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအပြည့်အဝထောက်ခံမှုရှာဖွေနေ။
ငါတို့အဘယ်ကြောင့်ဤသူကားအ တစ်ဦးသင့်လျော်သောလမ်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့ဖို့ဘယ်လိုပေါ်အလားအလာအလုပ်ရှာဖွေသူများကိုပြသဖို့ကြိုးစားနေ။ ဆောင်းပါး၏ထိပ်တွင်, သင်အလုပ်အကိုင်နှင့်မည်သို့တစ် CV ကိုဘယ်နေရာတွေမှာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ hit ရေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပြုသောအမှုရမည်ဖြစ်သည်သောအရာကိုမြင်ကြပြီ။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တောင်အာဖရိကနှင့် Philipines ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အဓိကအလုပျသမားတဦးဖြစ်ကြသည်။ ဒါဝေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကအဲဒီနိုင်ငံတွေမှာကနေန်ထမ်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏နေရာချပေးခဲ့သည်။
သို့သျောလညျးကြှနျုပျတို့ကုမ်ပဏီအဓိကအားဖြစ်ပါသည် ထိုကဲ့သို့သောအင်ဒီးယန်းများနှင့်ပါကစ္စတန်ကောင်းစွာပညာတတ်အလုပ်သမားများကအဖြစ်အာရှကနေကူညီပေးနေကလူ။ အောက်ပါနှစ်ပေါင်းတွင်ကျွန်တော်ဘာရိန်းနှင့်ဆီးရီးယားနှင့်အများဆုံးလိုအပ်နေသောနိုင်ငံများကမှလူကိုမြင်လျှင်ကိုစတင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်သီရိလင်္ကာနှင့်ပင်ပြင်သစ်သည်။
အထူးကုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းများမှာအဘယ်ကြောင့်ဤသူကားအ စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်ရှာဖွေနေအလုပ်စီမံခန့်ခွဲခြင်း။ သို့သျောလညျးသငျသညျအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းဖြစ်စဉ်ကိုရှာဖွေနေအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်ခုဂိမ်းအနိုင်ရမယ့်လမ်းဖေါ်ပြခြင်း။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌သင်တို့၏ဘဝကိုတိုးတက်အောင်၏ဒီတစ်ခါလည်းကောင်းတစ်လမ်း။
သို့သျောကြှနျုပျတို့မသာဖြစ်ကြ ပင်လယ်ကွေ့ဒေသကန့်သတ်ထားပေမယ့်ကျနော်တို့ကတကယ်တော့နိုင်ငံတကာမှာကလူကိုကူညီဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ ကြောင်း NBA အတွေ့အကြုံကိုနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဆရာဝန်များနှင့်အင်ဂျင်နီယာများအဖြစ်သင်တန်းကလူတရာမန်နေဂျာများနှင့်ပြည်သူများကိုဖြစ်ပါတယ်ရိုးရှင်းစွာအကြောင့်။ လူမျိုးအမှန်တကယ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရနိုင်သည်။
ပထမတော့ငါတို့သည်သင်တို့ဥပမာသင်က Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့ပါနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ LinkedIn တို့ပရိုဖိုင်းမှာကြည့်နိုင်ပါသည်, အလုပ်အကိုင်ရရှိရန်အသုံးပွုနိုငျရှိရာလူမှုမီဒီယာ profile များကိုအကြောင်းပြောနေတာနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအလားအလာအလုပ်ရှာဖွေသူများကိုကူညီလူမှုမီဒီယာကိုအသုံးပြုနေသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ.
ဒါကြောင့်, ကျွန်ုပ်တို့သည်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်ကူညီပေးနေနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ပင်လယ်ကွေ့ဒေသတွင်စကားပြောနေကြသည်။ ထိုစဉ်အမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ်မှတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်ပြည်ပမှာအလုပ်ရရန်အဖြစ်များစွာသောလူကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှအဖြစ်ကူညီဖို့ရန်။
ထိုအကြှနျုပျတို့ရှိသမြှ LinkedIn တို့ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအလုပ်အကိုင်အကြောင်းကိုငါသိ၏။ သငျသညျကျိန်းသေကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ် ဤဝန်ဆောင်မှုများပြည်ပမှာအလုပ်ရရန်။
အိန္ဒိယနှင့်ဥရောပထဲမှာအလုပ်ဈေးကွက်အပေါ်ရိုးသားဖို့ကုမ္ပဏီများမှထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအမြဲအင်ဒီးယန်းများနှင့်ပါကစ္စတန်ကကူညီရန်ကြိုးစား။ ထိုသူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကအသုံးပြုသူများကိုဖြစ်ကြသည်။ ၏သင်တန်း, ယူအေအီး၌အကြှနျုပျတို့၏က်ဘ်ဆိုက်၏ဒေသခံသုံးစွဲသူများကအများကြီးလည်းရှိသေး၏။
ဥပမာ, ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအမြဲလှုံ့ဆျောနှင့်လမ်းညွှန်အလုပ်ရှာဖွေသူများမျှော်လင့်နေပါတယ်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်ဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ် extensional အတွေ့အကြုံကိုရှိခြင်းနေကြသည်။
ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရဖို့အခြားသူများအားကူညီပေးခြင်းကျွန်တော်တစ်ဦးလူနေမှုအဘို့ပြုမှကိုချစ်အရာဖြစ်တယ်။ သို့သော်ဤမြေတပြင်လုံးသဘောတူညီမှုပြီးမြောက်ရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ ကျနော်တို့ကျွမ်းကျင်သူများများအတွက် CV ကိုရေးသားခြင်းနှင့်အတူကူညီပေးဖို့မျှော်လင့်နေကြတာပါ။
ကျနော်တို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်အဘယ်ကြောင့်ဤသူကားအ တစ်ဦးသင့်လျော်သောလမ်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့ဖို့ဘယ်လိုပေါ်အလားအလာအလုပ်ရှာဖွေသူများကိုပြသပါသည်။ အမ်းမရိတ်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့တဦးတည်းအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်နေရာချထားအထိရှာဖွေနေအလုပ်၏တောင်းစားမှသည်။
ပင်လယ်ကွေ့ဒေသကြီး, ကာတာနှင့်ကူဝိတ်နှင့်သင်တန်းကိုအဲဂုတ္တု။ အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာအားလုံး Arabic အဘိဓါန်စကားပြောနေကြသည်။ နှင့် အဲဒီမှာကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်ရရှိနိုင်ဤမျှလောက်များစွာသောအလားအလာအလုပ်အကိုင်များရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကိုသင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအလုပ်ရှာဖွေလုပ်ငန်းစဉ်၏ဂိမ်းအနိုင်ရမယ့်လမ်းဖေါ်ပြခြင်းအဘယ်ကြောင့်ဤသည်ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမတော့ကျနော်တို့ကငါတို့ချစ်သောစော်ဘွားအကြောင်းပြောနေတာနေကြသည်။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဖို့ကြိုးစားပါ ယူအေအီးဖွံ့ဖြိုးရေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအလားအလာအလုပ်ရှာဖွေသူများကိုကူညီလူမှုမီဒီယာကို အသုံးပြု. နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြောဖြစ်ပါတယ် ပင်လယ်ကွေ့ဒေသဖြစ်သည်။ ထိုအကြှနျုပျတို့ရှိသမြှ LinkedIn တို့ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအလုပ်အကိုင်အကြောင်းကိုငါသိ၏။
သငျသညျအေဂျင်စီများနှင့်အလားအလာထောင်ပေါင်းများစွာ၏များ၏ရှေ့မှောက်၌သင်၏ CV ရနိုင်ပါလိမ့်မည်ရိုးရှင်းစွာအဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တကယ်တော့အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာဘေ့နေသော Headhunters ။ ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကိုအတွက်အမြန်ဆုံးလမ်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကဘာလဲဆိုတာထွက်ရှာပါ။ ဒါကနေသောလူမှုမီဒီယာများတွင်အလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဖြစ်ပါသည် နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှု။ ထိုအခါအလုပ်ရှာဖွေသူအဖြစ်သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး LinkedIn တို့ပရိုဖိုင်းကို အသုံးပြု. သို့မဟုတ်ပင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူချိတ်ဆက့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုအောက်ပါအားဖြင့်အလွန်ကောင်းသောတန်ဖိုးကိုရနိုင်သည်။
သငျသညျကလူရောက်ရှိဖို့ရှာနေလျှင်အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်အမြဲ LinkedIn တို့အပေါ်လူတစ်ဦးအတွက်သူတို့နှင့်အတူဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ထိုမှတပါး, သင်သည်ထိုသူတို့မက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့သူတို့ကိုမေးနိုငျ သူတို့အချို့နေရာလွတ်ရှိခြင်းလျှင်။ သူတို့အချို့အကူအညီဖြင့်ပေးသို့မဟုတ်ပင်သင်တို့ကိုသစ်ကိုရှာဖွေကြသူလူဖြစ်ကြ၏နှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ်လျှင်အပြုသဘောဘက်တွင်, သင်အမြဲပြန်သူတို့ကိုရနှင့်မေးနိုငျ ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ဖွင့်လှစ်.
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကအလုပ်ရရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအဘယ်သို့ဆိုနိုင်ကြသည်လျှင်။ ကျနော်တို့ကျိန်းသေ LinkedIn တို့အနေနဲ့ကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်အလုပ်ရှာဖွေအရှိဆုံးအဆင့်မြင့်ပလက်ဖောင်းကြောင်းပြောနိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ထက်ပိုမို5လူဦးရေသန်းကြောင်းကိုသာပြီးခဲ့သည့်နှစ်က LinkedIn တို့ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်သင်ကပင်သိကျွမ်းထက်အများကြီးပိုလူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်သို့မဟုတ်ပင်အကြောင်းကိုအိပ်မက်မက်ဖို့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မယ်
Facebook ကသာဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အချို့သောလူမှုရေးရည်ရွယ်ချက်များမိုက်မဲရုပ်ရှင်တွေကိုဆက်သွယ်ထားသောနှင့်အောက်ပါနှင့်သင့်ဟောင်းရည်းစားသို့မဟုတ်တူသောအရာတို့ကိုလိုက်ဖမ်းနေကြတယ်အဘို့ဖြစ်၏ပါသောလူအများစုဟာ။ ဒါပေမယ့်လက်တွေ့မှာတော့ Facebook ကသင်ဒူဘိုင်းရှိလူများရှေ့တွင်သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုအသုံးပြုနိုငျသောကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
အလုပ်ရှင်များကိုအများကြီးဒီတော့တစ်ဦးအဖြစ် Facebook ကများမှာ ကလူငှားနှင့်အထွေထွေပြည်သူ့၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုမြှင့်တင်ရန်ပလက်ဖောင်း။ ဒါကြောင့်သင်ကအလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုပို့စ်တင်သို့မဟုတ်ပင်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှုများ, ယနေ့လူပူဇော်ကြသည်သူတစ်ဦးတစ္ဆေကုမ္ပဏီမြင်ရပါလိမ့်မည်ဆိုပါက။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ဤကုမ္ပဏီကိုတကယ်ကြီးထွားလာသည်နှင့်ကုမ္ပဏီများအများကြီးအမှန်တကယ်သူတို့လုပ်ဖို့ shoot သလောက်ကြော်ငြာမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါကိုကသူတို့ရဲ့ website သို့ပေါ်မှာကြည့်ရကျိုးနပ်ပါလိမ့်မည်ကိုပြသပါတယ်။ ပို့စ်တင်အလုပ်အကိုင်များဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာပူဇော် နှင့်ရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်း 500 အသစ်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုကျော်ဆိုကြပါစို့ခံရကြ၏။
ကျနော်တို့ကတကယ်တော့ Facebook ပေါ်မှာကတခြားစီအီးအိုနှင့်အတူချိတ်ဆက်မယ့်အလုပ်ရခဲ့တယ်သူကလူအများကြီးလည်းမရှိကိုသိသင်နှင့်အတူရှုပ်ထွေးမကျင့်။ အဘို့တခါတရံရုံရိုးရှင်းသောပေးပို့ခြင်း CVS အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်ကောင်းသောအလုပ်အကိုင်များအခွင့်အလမ်း သို့မဟုတ်ပင် gulf ဒေသ။ ဒါကြောင့်စီမံခန့်ခွဲသူကလူကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မည်တစ်ဦးကအလွန်ကောင်းသောမတ်လမ်း ထိုကဲ့သို့သောကာတာနိုင်ငံနှင့်ကူဝိတ်အဖြစ်ကိုလည်းနိုင်ငံများရှိကောင်းတစ်ဦးကုမ္ပဏီ.
ဟုတ်ကဲ့, သင်တန်း, ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများသည်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအဖြစ်အမှုအရာလုပ်နေကြသူတစ်ဦးကလူကိုရှာတွေ့များအတွက်အခမဲ့ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည် ပင်နိုင်ငံတကာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းလေဆိပ်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်တစ်ဦးက Facebook အကောင့်ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်မည်သည့်အချက်နှင့်အချိန်မရွေးသူတို့ကိုဝင်တိုက်ဖို့အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ အဖေကသင်ကူညီပေးရန်နှင့်သင့်ရာအရပျကစာရင်းစစ်အလုပ်အကိုင်များမှာဖြစ်ခြင်းဘို့သင့်ကိုကယ်တင်မည်။
ဒူဘိုင်းမြို့ Company ၏ CEO ဖြစ်သူ
ဒါကြောင့်သင်လျှင် တစ်ဦးသင့်လျော်သောလူနေမှုအခြေအနေနှင့်အတူအကောင်းတစ်ဦးအလုပ်ရှာနေကျိန်းသေဒူဘိုင်းကြိုးစားကြ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှလူများကဥပမာအိန္ဒိယကနေနှင့်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံအနေဖြင့်လူနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာတော်တော်လေး-အများကြီးအားဖြင့်လုပ်ဖို့လာမယ့်နေကြသည်။ အကောင်းဆုံး Market ကရိုးသားဖြစ်ပါသည် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းအလုပ်လုပ်ရန် အိမ်ခြံမြေစျေးရှိပါတယ်။ ထိုအရပ်မှသင်တို့ကိုအလွန်ကောင်းသောလစာနှင့်အတူတစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောအလုပ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒီစီးပွားရေးရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့အပေါ်အခြေခံပြီးကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုကျိန်းသေဘယ်မှာသင်သည်တတ်နိုင်သငျသညျအနာဂတျမှာကိုးကားဘို့အောင်မြင်ရန်ကူညီပေးခဲ့သည် အလုပ်အကိုင်အဒူဘိုင်းအတွက်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာအလုပ်အကိုင်များဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းပိုကောင်းတဲ့ get။ ဒါပေမယ့်သင်ကပြန်အဘူဒါဘီသို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းတစ်နှစ်အနည်းငယ်ဖြုန်းဖို့ရှိသည်ဘယ်သို့ပြုကြလိမ့်မည်မီ။
အစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နှစ်အနည်းငယ်နောက်ကျောကဝန်ဆောင်မှု-oriented နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း-oriented စီးပွားရေးကိုဆီထုတ်လုပ်မှုအပေါ်မှီခိုအနေနဲ့စီးပွားရေးကိုကနေအကူးအပြောင်းဖို့ဖြစ်တယ်။ နှင့်ဤအတူစိတ်တွင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အများဆုံးချမ်းသာကြွယ်ဝသောလူတဦးတည်းမှာဖြစ်လာချောက်ချားစညျး။ အကြှနျုပျခိုလှုံရာ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူထဲမှာန်ထမ်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏။ နှင့်သင်တန်း၏, သူတို့အမှန်တကယ် Sharjah ဖို့လည်းလူတွေယူပြီးပါတယ်။ နှင့်သင်တန်း၏ဤနည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. ထိုလူအပေါင်းတို့သည်အံ့သြဖွယ်အလုပ်အကိုင်များလူတွေကိုကူညီပေးနေကြဘူးမသာပေမယ့်လည်းမသာပြည်ပမှာအနေဖြင့်အနေဖြင့်လူတို့အဘို့အံ့သြဖွယ်အသက်တာသစ်ပေး အာရှဒါပေမယ့်လည်းဥရောပနှင့်ကနေဒါကနေလည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနေ။
နှစ်အနည်းငယ်ပြီးနောက်ဒူဘိုင်းအတွက်ချောက်ချားအိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ကိုပိုပြီးအဖိုးတန် လုပ်. 2004-2006 အတွက်ဒါခေါ်ဆောက်လုပ်ရေးစန်းခဲ့သည်။ အိပ်ရာဝင်ချိန်စျေးကွက်ဖွင့်လန်းစပြုပြီခဲ့ ဤမျှလောက်များစွာသောလူတွေဟာတကယ်လာနှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ ကုမ္ပဏီသစ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဒူဘိုင်းမြို့အလယ်ဗဟို၌မိမိတို့ရုံးခန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်တည်ဆောက်ခြင်းစတင်သည်။ အဆိုပါအကြီးစားဆောက်လုပ်ရေးသာတရုတ်အကြီးဆုံးမြို့ကြီးများမှနှိုင်းယှဉ်အမြန်ဆုံးကြီးထွားလာမြို့ကြီးများ၏ဒူဘိုင်းတဦးတည်းစေတော်မူပြီ။ ဤသည်မှာအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည် ဤမြို့ကိုနိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများအတွက်ဒီတော့ပေါ်ပြူလာဖြစ်လာသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့ကာတာဒူဘိုင်းအဖြစ်နိုင်ငံများ၏အတွေ့အကြုံပေါ်တွင်အခြေခံနှင့်အဘူဒါဘီနှင့်အတူအံ့သြဖွယ်ကုမ္ပဏီများမှတည်ဆောက်ခြင်းကိုစတင်ရန် Top-rated အလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှု။
ငါသည်သင်တို့လိမ့်မည်မျှော်လင့်ခဲ့ကြ ငါ့ကိုသင်ယူအေအီး၌သင်တို့၏အသက်နှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်တိုးကိုကူညီမယ့်အခွင့်အလမ်းပေး။ အကြှနျုပျ၏ရည်မှန်းချက်များလေ့ကျင့်ရေးသင့်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွင့်လှစ်သို့မဟုတ်ပြည်ပမှာအလုပ်ရှာဖွေရာတွင်ကူညီပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် orientated ။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတရာတစ်ခုခုသည် အဆိုပါအတွေ့အကြုံရလူတွေအများစုကယ့်ကိုလိုအပ်။ ဥပမာတစျခုလာမယ့်အဆင့်အထိသင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ရဲ့သီရိလင်္ကာကနေရိုးရှင်းတဲ့ကောလိပ်ကောင်လေးယူကြကုန်အံ့။
အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အခြေခံကျောင်းကပြီးအောင်ပြီးတော့ဒီဂရီကျောင်းကိုရွှေ့မည်။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းသငျသညျအလုပ်မလုပ်ချင်တဲ့လမ်းအတွက်တိုးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်ရှိခြင်း သင့်ရဲ့အနာဂတ်အလုပ်ရှင်များအတွက်တန်ဖိုးပေးဒီဂရီအဆင့်ကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ ထိုအခါရှည်လျားသောတည်ငြိမ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးရှိခြင်းကြသူရိုးရိုးသားသားလူဖြစ်ရအောင်မြင်သောဖြစ်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့ခြေလှမ်း အလုပ်ရှင်များရရောက်ရှိဖို့ပါလိမ့်မည်။ သငျသညျဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့မှအပိုမိုင်ရဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်သင့်သည်။
ဒူဘိုင်းအတွက်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်တိုးတက်နေစဉ်။ သငျသညျကျိန်းသေပိုကောင်းတဲ့အတှေ့အကွုံကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ ငါစီမံခန့်ခွဲခဲ့ကြ သာရှိသောကြောင့်ငါ၏အတှေ့အကွုံအကောင်းအမြတ်အစွန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတည်ဆောက်ရန်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဘောလုံးလှိမ့်ရအတော်လေးခက်အလုပ်လုပ်သင့်ပါတယ်။ အသက်တာ၌အသစ်သောအမှုအရာလေ့လာပါ။ အသစ်သောအလုပ်အကိုင်များနှင့်အပိုအတွေ့အကြုံမှကိုယ့်ကိုကိုယ် assign ဖို့ကြိုးစားနေ။ ဥပမာအားဖြင့်, သငျသညျအပိုသင်တန်းများနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနည်းပြရှာဖွေတာကိုစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်, သင်လုပ်ဆောင်ချက်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအစီအစဉ်ကိုစီမံခန့်ခွဲသင့်ပါတယ်။ A ကောင်းဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနည်းပြ Neil Patel ကနှင့်သူ၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ သငျသညျအကောင်းတစ်ဦးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလူတစ်ဦးဖြစ်လာဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ် နှင့်မည်သို့သင့်ရဲ့ SEO ဆိုသည်မှာစီမံခန့်ခွဲရန်။
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌, သင်ကျိန်းသေသင့် ယူအေအီးအတွက်လူကြိုက်များဘလော့ဂါများအဘို့အကြည့်ဖို့ကြိုးစား။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်သင်အွန်လိုင်းအမှုအရာတွေအများကြီးသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏အလုပ်အတွက်အများကြီးခရီးသွားလာလျှင်ထိုသင်တို့အဘို့ကောင်းသောဖြစ်နိုင်သည်။
အလုပ်, သင်ယူပြန်လုပ်နှင့်တက်လိုက်နာပါ။ ဒါကကျိန်းသေသင်အများကြီးပိုငွေရှာကူညီပေးပါမည်။ သူကလူအများစုဟာ အံ့သြဖွယ်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရာတွင်အမြဲတစေသိတော့သူတဝတည်းဖြစ်ကြ၏ အများဆုံးအဆင့်ဆင့်မှတူညီကျွမ်းကျင်မှုနှင့်သခင်အချိန်ကြာမြင့်စွာ။
ဒါကြောင့်မသင့်ရဲ့ကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ သငျသညျအလယ်မှာစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်ကိုထက်အများကြီးပိုဖြစ်လာကူညီပေးသည်။ သာအလုပ်အတွေ့အကြုံသင်သည်ဒူဘိုင်းအတွက်ငွေရှာဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ Hoever အချိန်ယူပြီးအကောင်းတစ်ဦးအလုပ်အကိုင်များလာပြီ။ စီမံခန့်ခွဲမှုအတှေ့အကွုံကစော်ဘွားအတွက်စူပါအရေးကြီးပါသည်။
သငျသညျအဘူဒါဘီနဲ့ဒူဘိုင်းအတွက်အမြင့်မားဆုံးမန်နေဂျာ၏ထိပ်ပေါ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ရဖို့ကြိုးစားသင့်အဘယ်ကြောင့်ဒါ, ဒီဖြစ်ပါသည်။ တဖန်သင်တို့တစ်ဦးတည်းသာလမ်းထဲမှာလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံကိုရှိခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ဒါအရေးကြီးပါတယ်။ ဒူဘိုင်းဟောင်းလူတို့အဘို့မဟုတ်, လူငယ်များအဘို့မဟုတ်, တစ်မြို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒူဘိုင်းမြို့တမြို့ဖြစ်ပါသည်။ နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ယဉ်ကျေးမှု။ တို့နှင့်ကြီးသောဆွဲဆောင်မှုအဘို့အရပျရှိယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနည်းပညာရုံအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပြီး, သငျသညျအမြင့်ဆုံးမိုးမျှော်တိုက်ကိုတွေ့မြင်နှင့်အကောင်းဆုံးအစားအစာကိုမြည်းစမ်းနိုင်မည့်မြို့တစ်မြို့ထိုကဲ့သို့သော Arabic အဘိဓါန်စားသောက်ဆိုင်အဖြစ်နေရာတစ်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်မှာရှိလူတိုင်းအသက်ရှင်နေထိုင်သို့မဟုတ်တစ်ကောင်းတဲ့အားလပ်ရက်ဖြုန်းဖို့လိုပါတယ်။
သင်တို့သည်အလျှင်းမအသက်တာ၌သင်အံ့သြသွားနှင့်သင်မြေပြင်ပေါ်တွင်အရာအားလုံးကိုမြင်ကြပြီကြောင်းလိမ့်မည်ဟုထင်ပါ။ သငျသညျကျိန်းသေလိမ့်မည် မိန်းမောတွေဝေဒူဘိုင်းကမ်းလှမ်းမှုဖြစ်။ အဆိုပါမြို့စားသို့မဟုတ်အပန်းဖြေနိုင်ပါတယ်တဲ့အကြီးအရာအရပျကမ်းလှမ်းမသာ။ သို့သော်အလုံးစုံတို့၏အထွဋ်, ဒူဘိုင်းကအရမ်းရှိပါတယ် ဆက်ဆက်တန်ဖိုးထားပါလိမ့်မည်ထိုကောင်းမွန်သောအလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှု။ ထိုမှတပါး, ကောင်းစွာပေးဆောင်ခြင်းနှင့်အရည်အချင်းပြည့်မီသောဆရာဝန်များအဖြစ်ဖွင့်အများအပြားအလုပ်အကိုင်များရှိပါတယ်မြင့်မားသောကြောင့်ပယ်တိုင်းတာရန်မကြောက်ပါဘူး။ ဥရောပ၌ရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ် Arabic အဘိဓါန်နိုင်ငံများတွင်အလုပ်လုပ်စေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်
ထိုမှတပါး, စက်ပြင်အထူးကု, အင်ဂျင်နီယာများ, ဆရာ, ဆရာမ, ဒါကြောင့်အဘယ်ကြောင့်သင်သည်သင်၏အိပ်မက်ကျေပွန်မှသင်တို့ကိုရပ်တန့်သောအရာကိုမကြိုးစားလိမ့်မယ်။ အဘယ်အရာကိုသင်တစ်ဦးကအီးမေးလ်ကိုဖျက်ပစ်စေသည် ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ၏ CV ကိုပေးပို့ခြင်းမပြုမီ?။ သငျသညျအတှေ့အကွုံရှိပါကမကြိုးစားအဘယ်ကြောင့် ?. သင့်ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်မှာ, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒူဘိုင်းတွင်သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေ့ဆုံရန်အခွင့်အလမ်းပေးပါ။
အမ်းမရိတ်မှန်ထမ်းများအတွက်ရှာဖွေနေကြသူထမ်းခေါ်ယူမှုနှင့်စီးပွားရေးသမားများ။ အလွန်မကြာခဏကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေးပို့သူတို့လိုအပ်သည့်ဝန်ထမ်း။ ဒါကြောင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီလက်တွေ့ကျကျအလုပ်ရှင်များကူညီပေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကိုရှာဖွေ 2009 ကတည်းကကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်သားများသည်။ နှင့်ကူဝိတ်နဲ့တူခြမ်းပြည်နယ်များနှင့်အတူကာတာနိုင်ငံအတွက်သင်တန်းနှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြေအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ရန်ထိုက်သည်ဆိုပါကသငျသညျအစဉျအမွဲတွေးမိပါလျှင်အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ဟုတ်တယ်, သင်တန်း, အဲဒါကိုဥပမာတစ်ခုကိုနှင့်အများဆုံးနိုင်ငံများရကျိုးနပ်သည်, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့န်ထမ်းများထံမှအခွန်များစုဆောင်းကြပါဘူး။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူပူးပေါင်းတကယ်ကျိုးနပ်သည်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးသစ်ကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရဖို့သင်ကူညီနိုင်ကြသည်ရိုးရှင်းစွာအကြောင့်။ ထိုမှတပါး, လုံးဝနီးပါးဒူဘိုင်းဈေးကွက်၌သင်တို့၏ဇာတ်လမ်းကိုတည်ဆောက်ရန်။ ကျနော်တို့ရှေ့ဦးစွာ မှစ. သင်ကကူညီပေးဖို့ကဒီမှာရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့သင်တန်းများနှင့်ပြည်ပကနေလူတွေကိုကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုများစွာသောအခြားအမှုအရာရဖို့ကိုကူညီဒီမှာပါ ဒူဘိုင်းအတွက်ပိုကောင်းတဲ့နှင့်ပိုပြီးတောင်းဆိုမှုများအလုပ်ရရန်။
ဒူဘိုင်းအိပ်ဘယ်တော့မှတစ်ကယ့်ကိုအံ့သြဖွယ်သောမြို့ဖြစ်၏။ ကောင်းပြီ, အဖြစ်မှန်အတွက်ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဤမြို့၌အလုပ်လုပ်နေလူတွေကိုမြင့်မားသောအမြတ်အစွန်းအောင်မြင်ရန်နိုင်။ ထိုမှတပါး, အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတကောင်းသောထက်ကိုယ့်ကိုပိုဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများမှာအစာရှောင်ခြင်းအလုပ်ကိုစတင်နိုင်ပါသည်။ တစ်ကယ့်ကိုကအရမ်းအဆင့်မြင့်အတွက်, အိန္ဒိယနှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့သို့မဟုတ်သီရိလင်္ကာနေထိုင်ခဲ့ကြသူကအခြားလူတို့တွင်။ ခဏခဏ ကျွမ်းကျင်သူများမိမိတို့၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအကြံပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုဒီကိုသိသောကြောင့်, ငါတို့အများအပြားစျေးကွက်များတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာ operating ပြီ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာမသာ ဒါပေမယ့်လည်းဥရောပနှင့်ကနေဒါနှင့်အမေရိက၌တည်၏။
သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း, သင်တန်း, ဒူဘိုင်းအတွက်စတင်နိုင်ပါသည်, သို့သော်အဲဒီမှာအဆုံးသတ်မရှိပါ။ သင်သည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှငျ့သငျပင်ဖျက်ပစ်လို့မရဘူးတစ်ဦးစွန့်စားမှုဆက်လက်နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာဤမျှလောက်များစွာသောကြီးမြတ်သောနေရာများရှိပါသည်။
အလွန်မကြာခဏကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ကုမ္ပဏီများအတွက်ခက်ခဲအလုပ်၏နှစ်ပေါင်းများစွာရရှိခဲ့ကြပြီသူတို့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အတွေ့အကြုံများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုခငျြသူမြားကလူ။ ဥရောပမှာသူတို့ရဲ့အလုပ်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေ, Dublin ဒါမှမဟုတ်လန်ဒန်မှာအင်္ဂလန်တွင်အိုင်ယာလန်ဥပမာ။
အာရပ်ရှိတ်စော်ဘွားများအလွန်မကြာခဏတန်ဖိုးထား စော်ဘွားများနှင့်ကာတာကုမ္ပဏီများအတွက်၎င်းတို့၏ဝန်ထမ်းများကို။ ထိုအခါကလူအခြားကုမ္ပဏီများအတွက်အလုပ်လုပ်အားမရ။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတစ်ကယ့်ကိုမြင့်မားတဲ့အဆင့်မှာရပ်တယ်။ အဖြစ်ဝေးမြှင့်တင်ရေးနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖြစ်ဒူဘိုင်းအတွက်ဒါပေမယ့်လည်းလန်ဒန်နှင့်နယူးယောက်ရှိမသာ, စိုးရိမ်ပူပန်ကြသည်။
ရှိတ်စော်ဘွားအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့်ဆက်နွယ်ပြီးအလွန်အာဖရိကမှနိုင်ငံခြားအလုပ်သမားငှားရမ်းရန်ကြိုက်တယ်။ သူတို့ထက်သူတို့တစ်တွေနည်းနည်းစျေးသက်သက်သာသာဖြစ်ကြသည်မသာသောကြောင့် ပျမ်းမျှအနေဖြင့်အလုပ်သမားများကိုသို့မဟုတ်ပါကစ္စတန်ဒါပေမယ့်လည်းအလွန်မကြာခဏသူတို့ကဒီမှာသိသာတဲ့အလွန်ကြိုဆိုဖြစ်သောအချိန်ပိုအလုပ်လုပ်လို့ပဲ။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, အရာအားလုံးပဲကောင်းလှ၏။ သငျသညျကိုစဉ်းစားပါလျှင် သာအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနှင့်ထိုကဲ့သို့သောကာတာနိုင်ငံနှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျအဖြစ်နိုင်ငံအများအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ကောင်းပြီ, သငျသညျဗေီစကားပြောနိုင်ငံများအတွက်အတွေ့အကြုံရှိရမည်။
ရှိတ်စော်ဘွားများ, ကံမကောင်း, paid ကျောင်းများပူဇော်ကြဘူး, ဒါပေမဲ့သူတို့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းသင်တန်းများကိုဆက်ကပ်။ ဥပမာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကော်ပိုရေးရှင်းအတွက်ဘယ်မှာသင်တစ်ဦးကယ့်ကိုအေးမြအတွေ့အကြုံကိုရနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ထားပြီးစီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အသို့ရတဲ့အခါနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကိုချွတ်ပေးချေပါလိမ့်မယ်။ တိုက်ရိုက်ဆော်ဒီအာရေဗျသို့မဟုတ်ကာတာနိုင်ငံကနေရှိတ်အောက်ရှိကုမ္ပဏီများတဦးတည်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်အတွင်းကပဲပျော်မွေ့သည်။
အဘယ်ကြောင့်တန်ဖိုးရှိ သိ. အခြားနိုင်ငံများမှမဟုတ်ရုံအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုဖြစ်ပါတယ်။
တိုတောင်း, ဒီတိုင်းပြည်ဒေါ်လာနှင့်အတူစီးဆင်းနှင့် မကောင်းတဲ့လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာနများနှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်မပါဘူး။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကာတာနိုင်ငံအတွက်အလုပ်လုပ်ရ။
တဖန်သင်တို့ကာတာနိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်အကြောင်းကိုအလေးအနက်စဉ်းစားနဲ့အပေါ်ကုမ္ပဏီများမှဖက်ကသင့်တယ် တကယ်အောင်မြင်မှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သောဧရိယာထဲမှာသူများ အာရပ်နိုင်ငံတွေအတွက်ရှိတ်စော်ဘွားများအလွန်မကြာခဏရုံကာတာနိုင်ငံအတွက်ကုမ္ပဏီအတွက်လက်ျာန်ထမ်းများအတွက်ကိုကြည့်လို့ပဲ။
သင်သည်များစွာသောအရပ်တွင်လေးလေးနက်နက်အလုပ်ရှာပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သောကာတာနိုင်ငံအဖြစ်နိုင်ငံအများနိုင်ပါတယ် တကယ်အံ့သြဖွယ်အလုပ်အခွင့်အလမ်းများကိုဆက်ကပ်။ လူအမြားကျွမ်းကျင်သူများအဲဒီမှာအလုပ်အကိုင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေလုံးဝနီးပါးမပြီးဆုံးသေးသောဖြစ်ကြပြီးအလွန်ရှည်လျားကန်ထရိုက်များအတွက်အလွန်ကောင်းသောတည်ငြိမ်အလုပ်အကိုင်ပေးပါ။ ကာတာနိုင်ငံတှငျနထေိုငျနှင့်အလုပ်လုပ်၏တစ်ခုတည်းသောကျဘက်ကိုကန်ထရိုက်အလွန်တိုတောင်းသောဖြစ်ကြသည်ကိုတကယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုမှတပါး, ရေရှည်စာချုပ်ရဖို့စာရွက်စာတမ်းများတွေအများကြီးလိုအပ်ပါသည်။ နှင့်ရာဇဝတ်မှုစစ်ဆေးခြင်းကိုလိုအပ်သောမှာအားလုံးဖြစ်ပါသည်, သငျသညျအာရဗီနှင့်အင်္ဂလိပ်စာအလွန်ကောင်းစွာစစ်ဆေးမှုများကိုပါအောင်မြင်ဖို့ရှိသည်။ သို့သော်ဤအမျိုးအစားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်တကယ်သင့်မိသားစုသင့်ရဲ့အနာဂတ်လုံခြုံနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျရှိဝင်ငွေပိုက်ဆံအခြားနိုင်ငံများသို့ဆုံးသောကြောင့်သေချာဘို့, youâ€™ပြန်လည်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများလည်းပျော်ရွှင်ဖြစ်လာသည်။ အိန္ဒိယသို့မဟုတ်ပါကစ္စတန်ဖို့ဥပမာအားဖြင့်, ကာတာနိုင်ငံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသင်သည်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါသည်လျော့နည်းလက်တွေ့ကျကျ 20 ကြိမ်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကာတာနိုင်ငံများတွင်တစ်ခုအပြင်ဘက်တွင်လုပ်သားအဖြစ်, သင်တစ်ဦးနေအိမ်မဝယ်သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမတည်မဆောက်နိုင်။ တောင်မှစျေးကွက်အပေါ်တစ်ဦးနှစ်ရှည်လများကုမ္ပဏီနှင့်အတူအခြေခံပါတယ်။ အများစုမှာကုမ္ပဏီများသည်အစိုးရ၏ကိုယ်စားအဲဒီမှာလည်ပတ်ပေမယ့်ကာတာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကလူတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစဉ်းစားရကျိုးနပ်သည်။
ကနေထိုအရပ်၌များစွာသောပိုပြီးရှိတ်စော်ဘွားများသောကြောင့်ထိုသို့မယ့်ကာတာနိုင်ငံမှန်ထမ်းရတဲ့အတွက်ကူညီပေးနေပါလိမ့်မည်အခြားသောလမ်း သူတို့ကိုတိုင်းပြည်အတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ကူညီပေးနိုင်နေသောလူတို့နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အလွန်ဆန္ဒရှိနေသောဒူဘိုင်း။ ဥပမာအားဖြင့်, ကာတာနိုင်ငံအတွက်ပစ္စုပ္ပန်မှာ။ ကုမ္ပဏီအများအပြားတရုတ်နှင့်ဗီယက်နမ်ကဲ့သို့သောနိုင်ငံများတွင်အဘို့မိမိတို့အလားအလာတည်ဆောက်။
ယခုရှိသင့်ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံရင်းနှီးမြှုပ်နှံရကျိုးနပ်ရှိပါသည်။ ကာတာနိုင်ငံကနေရှိတ်စော်ဘွားများမကြာခဏသွားနှင့်အဘို့, ဘောဂဗေဒအတွက်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာစုပ်သောကြောင့် အနာနှင့်ကုမ္ပဏီများ၏ထုတ်ယူခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအမျိုးမျိုးသောစီမံကိန်းများတွင်ဥပမာ အဆောက်အဦမီးရထားလမ်း, ရေနံသန့်စင်စက်ရုံကိုအင်ဂျင်နီယာနှင့်များစွာသောအခြားကုမ္ပဏီများ။
သင်ဤတိုင်းပြည်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီတွင်နေထိုင်ပါလျှင်သင်ကာတာနိုင်ငံအတွက်နှစ်ဆဝင်ငွေ။ သငျသညျလက်တွေ့ကျကျဤသို့ပြောနိုင်သည် တစ်ခုတည်းသောကျဘက်ကိုသင်သည်ထိုအိမ်မဝယ်ကြဘူးဆိုတာပါပဲသုံးကြိမ်ထက်ပိုဒါ။ သင်တို့မူကား, ယူအေအီး၌သင်တို့၏တိုင်းပြည်သို့ပြန်လာလျှင်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာစော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနှင့်သေချာဘို့သင့်ကိုအဘယ်သူမျှမပြဿနာလည်းမရှိဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီရှိအိမ်တစ်အိမ်ကိုဝယ်ချင်ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, သင်ရရှိမည်သောငွေစုဘို့တတ်နိုင်ကြသည်။ ကာတာနိုင်ငံအတွက်အလုပ်လုပ်နေသည့်အခါ, သင်မွေးဖွားခဲ့ရှိရာနိုင်ငံတွင်သင့်ရဲ့အင်ပါယာကိုတည်ဆောက်စေ။
၏သင်တန်းရုံကာတာမှရတဲ့နှင့်အလုပ်စတင်အသက်တာ၌သငျသညျအောင်မြင်မှုအာမခံချက်မပေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့်နှာရည်ယိုသငျသညျဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာဝင်ငွေရနိုင်မည့်နေရာတစ်နေရာကြောင်းသတိပြုသင့်ပေသည်။ တစ်ထမ်းရှာဖွေသူသို့မဟုတ် headhunter တစ်ကုမ္ပဏီသမ္မတသို့မဟုတ်ဒါရိုက်တာအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်။
ကာတာနိုင်ငံအတွက်ကုမ္ပဏီများသည်အလွန်မကြာခဏသူတို့ကုမ္ပဏီသစ်၏အစိတ်အပိုင်းများကိုတည်ဆောက်ကူညီပေးနိုင်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်ဆုကြေးငွေများနှင့်အပိုပိုက်ဆံပေးဆောင်အလွန်ရေပန်းစားသည်လို့ပဲ။ ဥပမာအားဖြင့်, အလွန်မကြာခဏရှိပါတယ် ယခုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလှန်သောကုမ္ပဏီများမှ Blockchain အပေါ်အခြေခံပြီးငွေကြေးနှင့်ငွေပေးချေမှုစနစ်များကို cryptocurrency.
ဒါ့အပြင် သင်လိုချင်တာနဲ့ဘဝတစ်ဦးလေးနက်ခြေလှမ်းကိုစဉ်းစားလျှင်, ကာတာကယ့်ကိုအကောင်းတစ်ဦးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်မှာရှိသင့်အသက်တာကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်နှင့်သင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပရိုဖိုင်းကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးသင့်မိသားစုပျော်ရွှင်ကြလိမ့်မည်နှင့်သင့်အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေများကိုသငျသညျဂုဏ်ယူပါလိမ့်မည်, ဆိုလိုတာက 40% ကျော်မြင့်တက်မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကနေကျနော်တို့လက်ရှိအလုပ်အကိုင်များကိုပူဇော်သောအကောင်းဆုံးနိုင်ငံတွေအများစုကြိုးစားသောနိုင်ငံများတွင်သိရ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူကုမ္ပဏီများမှပေး အမှန်တကယ်အမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာ။
ကျွန်တော်တို့ဟာဥရောပနိုင်ငံတွေအကြောင်းကိုဒီနေရာမှာစကားပြောနေကြသည်လျှင်။ ကျနော်တို့ဆိုက်ပရပ်စ်ဆိုလိုသည်မှာ, စီးပွားရေးလုပ်နေတာများအတွက်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံတွေအကြောင်းပြောနေတာနေကြတယ် မော်လ်တာ နှင့်ပြင်သစ်။
ဒါကြောင့်နွေးရဲ့နှင့်သင်တစ်လ€ 3000 ကျော်အရှိဆုံးအဘို့အလွန်ကောင်းငွေရှာနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးတိုင်းပြည်နှင့်အတူစတင်ဖွင့်ကြပါစို့။ cryptocurrency နှင့် Bitcoin နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောကုမ္ပဏီသစ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မော်လ်တာဥရောပအတွက်ငွေရှာဖို့အကောင်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။
သငျသညျကွီးစှာသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစေနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်လှပသောငွေရှာနိုင်ပါတယ်ရှိရာလာမည့်တိုင်းပြည်။ ဒီတိုင်းပြည်အတွက်သေချာ, သင်လက်တွေ့ကျကျအလုပ်ပါမစ်ရနိုင်နှင့်စီးပွားရေးအဆင့်ဆင့်အမှုဆောင်အရာရှိနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။
ဒီတိုင်းပြည်ဟာအလွန်လွယ်ကူစွာဥရောပတိုက်တွင်ဘဏ်လုပ်ငန်းကန်ထရိုက်ထူထောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကနေ, သင်အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရနိုင်တယ်။ ဒါကသိပ်ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်နိုင်ငံတကာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်စပ်သောဥပမာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဒါဟာကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုကနိုင်ငံတကာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကြောင်းကိုတကယ်အလေးအနက်ထားစဉ်းစားရကျိုးနပ်သည်။ ဥရောပမှာတော့အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုထောင်ပေါင်းများစွာ၏အငျတာနကျပျေါအပေါ်နေ့စဉ်ဆက်ပြောသည်နေကြသည်။ သငျသညျဥရောပတိုက်တွင်အမြင့်ဆုံးပေးဆောင်အလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုကြည့်သင့်ပါတယ်။
နိုင်ငံအများအပြားဥရောပမှရွှေ့ပြောင်းလာသူများဆောင်ခဲ့အပေါ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူ။ ထိုအကြီးမားသည့်ကုမ္ပဏီများအတွက်အလုပ်မလုပ်ဖို့အသက်တာသစ်နှင့်အသစ်သောအခွင့်အလမ်းကိုစတင်ချင်ပါတယ်သူတွေကိုဥရောပ၌စူပါပျော်ရွှင်ကြသည်။ အနည်းဆုံးသူတို့တစ်တွေပုံမှန်အဆင့်တွင်လုပ်ကိုင်ဖို့သူတို့ကိုနှင့်သူတို့၏မိသားစုကိုကူညီလိမ့်မည်ဟုပိုကောင်းတဲ့ဘဝကိုစတင်ရန်ရိုးရှင်းစွာကျော်လာကြ၏။
အာဖရိကသို့မဟုတ်အိန္ဒိယဥပမာတခြားနိုင်ငံတွေမှနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ ဥရောပကယ့်ကြီးမြတ်နေရာဖြစ်၏။ သငျသညျကောငျးမှငွေရှာဒါပေမယ့်လည်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်သင့်ရဲ့သားသမီးတွေနဲ့နိုင်ပါတယ်မသာအဘယ်မှာရှိ။ ထိုအသေချာဤအကြိမ်ကယ့်ကိုတတိယနိုင်ငံတွေကမ္ဘာကြီးကိုလျှင်သင့်အိမ်အနီးရှိကောင်းတစ်ကျောင်းသို့မဟုတ်အလွန်ကောင်းသောဆရာဝန်ကဲ့သို့လွယ်ကူသောမရှိကြပေ။
ကံမကောင်းစွာပဲ, ပစ္စုပ္ပန်ကာလ၌, သင်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းအရပျမြားနှငျ့တည်နေရာကြောင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြောပြရန်ရှိသည် လူမှုရေးဘဝတစ်ဦးသည်အလွန်အရေးပါသော ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုသိသောနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များမှပြောင်းရွှေ့လာသောလူကဒီမှာကြှနျုပျတို့အားလုံးလုံလောက်သောဖော်ရွေမရှိကြပေ။ ကျနော်တို့ဥရောပတိုက်သားအကြောင်းကိုဒါပေမယ့်လည်းအိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သို့မဟုတ်သီရိလင်္ကာမှလူအကြောင်းပြောနေတာနေကြသည်သာ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအကြံပြုသောကောင်းသောတိုင်းပြည်အဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်အသစ်န်ထမ်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဆွဲဆောင်ရာဂျာမနီ, ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီဇာသို့မဟုတ်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမပြဿနာတွေရှိပါတယ်။ ဂျာမနီမှာအလုပ်ဖြစ်ပါသည် ကောင်းသောအတွေ့အကြုံနှင့်အတူအစဉ်မပြတ်နေတဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်နဲ့ကောင်းတဲ့နေရာအရပ်။ တစ်ဦးအလုပ်ရှင်နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအများစုဟာဖြစ်နိုင်ခြေအလုပ်သမားကျင့်ထုံးအတွက်သတ်မှတ်ထားသောနေကြသည်။ ဂျာမန်ကုမ္ပဏီများသည်ဒါ့အပြင်ဘယ်တော့မှနှောင်းပိုင်းတွင်ငွေပေးချေမှုနှင့်အတူနှင့်ဝန်ထမ်းစိမ်ခံရဖို့အဘို့အဘယ်သူမျှမဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။
သငျသညျသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်းနောက်တစ်နေ့စိတ်ဝင်စားဖို့တိုင်းပြည်ဥရောပ၌နယူးဇီလန်နှင့်အိုက်စလန်သည်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကနေကုမ္ပဏီများရှိတွေအများကြီးရှိသူတို့၏အကိုင်းအခက်ဖွင့်လှစ်။ နှင့် New Zeland ငွေကြေးအများကြီးဆက်စပ်မြင့်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနှင့်အိန္ဒိယနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါသောကွောငျ့, ဥပမာ, လန်ပိုက်ဆံအတော်လေးကောင်းစွာနိုင်ငံတကာစျေးကွက်အပေါ်ထားရှိခြင်းဖြစ်သည်အလုပ်လုပ်တစ်ခု amzing နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဒါကြောင့်ဒေသအတွင်းကနေကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်း. စဉ်းစားရကျိုးနပ်သည် ?. ဟုတ်ကဲ့, က, အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနှင့်အတော်ကြာဥရောပနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဖြစ်ပါသည်, အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်နှစ်ဆတိုး။ ထိုမှတပါး, ဝင်ငွေရရှိမှုဂျာမဏီတွင်သို့မဟုတ်တောင်မှဂရိတ်ဗြိတိန်မှာထက်လေးဆပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ကြသည်။
John Smith ရဲ့ CEO - ငါယူအေအီးရောက်ကြ၏။ ပိုလန်ကနေဒူဘိုင်းငါ့ဇာတ်လမ်းကို tels ဒါ။
ပိုလန်သငျသညျအလှနျကောငျးငွေရှာနိုင်ပါတယ်ရှိရာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်။ ကျနော်တို့ဗဟိုဥရောပအကြောင်းပြောနေတာနေတယ်ဆိုရင်, ပိုလန်ဥရောပမှာအများဆုံးဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအဖြစ်ဖော်ပြနိုင်အများအပြားဒေသများရှိဦးဆောင်နေသည်။
တိုင်းပြည်ကရေနံနှင့်နိုင်ငံတကာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်နိုင်ခြေအများစုရှေ့ဆက် 30 နှစ်လာမည့် 50 လူသိများလိမ့်မည်, အခြားဥရောပနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ကယ့်ကိုမြင့်မားတဲ့အဆင့်မှာကဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျော်ကြားသည်။
ဒီ၏နောက်ထပ်အလွန်ကောင်းသောရှုထောင့်တစ်ဦးကိုအလုပ်ရှာရန်သင့်ရည်မှန်းချက်ကိုဥပမာကအကြီးဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခေါင်းစဉ်အနီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်သကဲ့သို့သင်တို့လည်းပိုလန်ကိုရွေးချယ်ကြောင်း, ကဂရိတ်ဗြိတိန်နှင့်ဂျာမနီမှအတော်လေးနီးစပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, မော်လ်တာဆိုက်ပရပ်စ်မှအတော်လေးနီးစပ်သည်နှင့်သင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုလက်တွေ့စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးပိုလန်စီးပွားရေးပူးပေါင်းကြသည်ကိုငါသိ၏။ ထိုအရပ်၌ပျံလေယာဉ်ဖြင့်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒါဟာတကယ်အနည်းငယ်အချိန်ဖြုန်းခြင်းနှင့်ပိုလန်အတွက်အလုပ်ကိုစဉ်းစားရန်ကျိုးနပ်သည်။ ဒီတိုင်းပြည်ကောင်းသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတ system ကိုကမ်းလှမ်းသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများ။ အားလုံးအထက်, သငျသညျထိုကဲ့သို့သောရေနံစိုးရိမ်ပူပန်မှုများသို့မဟုတ်ဆေးဝါးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအဖြစ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်။ ဒါကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဤအမျိုးအစားမှကြွလာသောအခါပိုလန်ရှေ့တန်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ စတိုးဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ဟိုတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလွန်လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ကြောင်း ထိုသို့ပင်နိုင်ငံခြားသူတစ်ဦးအဖြစ်ကဒီမှာအလုပ်ရရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
သငျသညျဥရောပ၏ဗဟိုအတွက်နိုင်ငံတွင်းရှိအလုပ်လုပ်စဉ်းစားခဲ့ကြပါလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ကုမ္ပဏီဖြစ်သောကြောင့်ရှေးခယျြသငျ့သညျ ကျနော်တို့လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှပြောင်းရွှေ့လာသောလူပိုလန်အတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ဖို့ကူညီ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကျနော်တို့တတိယကမ္ဘာမှရွှေ့ပြောင်းလာသူများပိုလန်အတွက်အလုပ်တစ်ခုကိုကူညီရှာဖွေပေးနိုင်ခဲ့ကြပြီ။
တကယ်လိုအပ်နှင့်အတော်လေးဝေးကွာသူတို့ရဲ့မိသားစုထံမှအသစ်တစ်ခုကိုတိုင်းပြည်အတွက်အသက်တာသစ်ကိုစတင်ကြိုက်နှစ်သက်ပေမယ့်သူကလူ အခြို့သောအချိန်ပြီးနောက်၎င်းတို့၏မိသားစုထံသို့ဆောင်ခဲ့နှင့်ငွေဝင်ငွေကိုစတင်ရန်။ ဒါကြောင့်အရာခပ်သိမ်းကောင်းစွာကဒီမှာလုပ်သည်, ပိုလန်ဟာအလွန်ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးဆေးဘက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပိုလန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခန်းများနှင့်ဆေးရုံတစ်ကယ့်ကိုမြင့်မားတဲ့အဆင့်မှာတကယ်ရှိပါတယ်, ကြီးသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုရှိသည်။
သင်တစ်ဦးကမိသားစုရှိပါကအပြင်, ပိုလန်အတွက်ဒူဘိုင်းကနေဒါမှမဟုတ်အိန္ဒိယပါကစ္စတန်သို့မဟုတ်ဘင်္ဂလားဒေ့ကနေသူတို့ကိုရဖို့ပြဿနာမရှိပါဘူး။ အဆိုပါပိုလန်အစိုးရရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရန်အလွန်ကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရချင်ပါတယ်သောသူတို့အဘို့။ ထို့အပြင်အီးယူအတွက်အလုပ်ပါမစ်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမပြဿနာ။
တစ်ဦးကအလုပ်ပါမစ်ကအရမ်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာကာလအတွက်ထုတ်ပေးသည်။ အဘို့ ကာတာနိုင်ငံသို့မဟုတ်ယူအေအီးကဲ့သို့အခြားအာရပ်နိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဥပမာကျနော်တို့ရိုးစွန်းဒေသများမှသည်အခြားတပါးအမြိုးသားကိုထောကျပံ့ရန်အလွန်စိတ်အားထက်သန်နေကြသည်ဟူသောအချက်ကိုအပေါ်ကိုယျ့ကိုယျကိုဂုဏ်ယူ။
ထမ်းဘိုးတို့ကိုမိမိတို့ကိုယ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအကြာကပိုလန်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖျက်ဆီးခံရသောမီးလောင်တိုက်သွင်းအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါရိုးစွန်းဒေသများမှသူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်သူတို့မှာလည်းလူမျိုးရေးခွဲခြားနှင့်သူတို့မဟုတ် တကယ်အစွမ်းထက်သည့်ကုမ္ပဏီများမှာအလုပ်မလုပ် အမြဲတမ်းဒီအကူအညီလိုအပ်ကြောင်းသူကအခြားလူတစ်ဦးကိုကူညီပေးပါတယ်။
ဒီတော့ပါစေ နိုင်ငံကအကောင်းဆုံးအလုပ်သောကောက်ချက်ထဲမှာထည့်သွင်း။ တစ်ဦးကအလွန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထင်မြင်ချက်ဒူဘိုင်း, အဘူဒါဘီ, နှင့်အမေရိကန်နှင့်ဥရောပမြို့ကြီးများ၏အနည်းငယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စ၏အဘယ်အရာကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သငျသညျအလုပျမှရှာကြသည်ကမ္ဘာကြီး။ ထိုအရာကသင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ မြောက်အမေရိကဆိုက်ပရပ်စ်၌နေသော Is ?. သို့မဟုတ်လန်ဒန်စီးတီး ?. သို့မဟုတ်ပင်တစ်ဦးအမြန်အပြားကိုဆုတ်ခြင်းနှင့်အဆုံး၌, တစ်ဂျာမနီဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒါပေမယ့်အဓိကအစိတ်အပိုင်းကိုသင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သငျသညျအောင်မြင်ရန်ရှာကြသည်ကြောင်းကိုသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်များပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောနဲ့အတူလာမယ့်မယ့်တိုင်းပြည် ပိုက်ဆံအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်အောင်၏နည်းလမ်းများ။ ကျွန်တော်မှားတိုင်းပြည်ရွေးချယ်ရာတွင်လျှင်ဒါကြောင့်အကျိုးဆက်များယူနိုငျသညျ။
ကောင်းပြီဥပမာ, သငျသညျဟိုတယ်အလုပ်တစ်ခုရဖို့ရှာဖွေနေလျှင်သို့မဟုတ်အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးအဖြစ်လုပ်ဆောင်နေ ငါဒူဘိုင်းနှင့်ကာတာကိုရွေးချယ်ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျထိုကဲ့သို့သောရုံးများနှင့်ပိုပြီးအရေးအသား-related အလုပ်အကိုင်များသို့မဟုတ်ပင်စျေးကွက်အဖြစ်ကုမ္ပဏီများမှရွေးချယ်ရာတွင်လျှင်ဒါကဥပမာပါပဲ။ ကအများကြီးပိုရရှိနိုင်သောကွောငျ့ငါလန်ဒန်ကိုရွေးချယ်ပါလိမ့်မယ် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှလူများအတွက်။
ဟုတ်ကဲ့, သို့သော်သင်ဆင်းသက်လိမ့်မည်ဟုအများဆုံးစိတ်ဝင်စားခြင်းနှင့်တကယ်တော့အများဆုံးအဆင့်မြင့်နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ဖြစ်ပါသည် သင်၏အသက်တာတွင်အလွန်အောင်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်လာပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, စီမံခန့်ခွဲမှုအခွင့်အလမ်းများအတွက်, သင်ပိုက်ဆံတွေအများကြီးငါဖြစ်စေမည်။
အဆိုပါစီးပွားရေးနှင့်ကမ္ဘာလုံးပတ်လည်ဂျော့ရယူခြင်းပဲစူပါဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါငါတော်တော်များများကုမ္ပဏီများအတွက်ပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်နေခဲ့ပါသည်ထိုကဲ့သို့သောအိုင်တီ-related ကုမ္ပဏီများနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ဟုတ်ပါတယ်, ငါကငါ့ကိုအသက်ရှင်ထွက်ခွာရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုဆိုနိုင်။ ငါသည်ငါ့ရက်ပေါင်း၏ကျန်ထွက်လဲရှာဖွေနေ။
သငျသညျအကြှနျုပျကိုဥရောပတိုက်တွင်ထွက်ခွာအဖြစ်စွန့်ခွာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါငါတစ်ဦးအလွန်ပညာတတ်များနှင့်အတွေ့အကြုံရှိအလုပ်အမှုဆောင်ဖြစ်လာရန်သင့်အားအားပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်ဥရောပတိုက်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် ၏သင်တန်းသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရောက်ရှိဖို့အခြားသူတွေကူညီပေးနေ။ ကြောင်းအလိုတော်ကိုသင်တို့အားအနာဂတ်အတွက်လှုပ်ရှားမှုများကိုအဘို့သင့်ကိုယ်ပိုင်မဟာဗျူဟာတည်ဆောက်ခွင့်ပြုလို့ပဲ။
ငါ၏အကုမ္ပဏီ၏ CV ကိုကိုင်ထားကြစို့။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စပေါ်ဦးခေါင်း။ ထိုအခါငါတို့တှငျသငျသညျပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်ကူညီဖို့ပါစေ။ ပန်ကြားအပ်ပါသည်ပတ်သတ်ပြီး, ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီဂျွန်စမစ်၏ CEO ။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ ယခုဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်များအတွက်ကောင်းသောလမ်းညွှန်ပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူယခုသင်ကသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်လမ်းပြသောအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ရရှိနိုင်သည်။
စက်တင်ဘာလ 27, 2019
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု - ကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်လမ်းညွှန်
Bayt မှာဂျော့ - ယူအေအီးအတွက် No.1 ယောဘသည်ပေါ်တယ်
သြဂုတ်လ 26, 2019
တော်ဝင်ဗီဇာ - ကနေဒါ, အမေရိကန်, ဥရောပတိုက်တွင်အလုပ်စတင်ပါ
ကျေးဇူးပြု Login မှတ်ချက်ပေးရန်